Ihlaziyiwe ngokupheleleyo Ivenkile yeAustralia eChadstone ukuze ivulwe nge-24 kaNovemba | Ndisuka mac
Ivenkile yaseAustralia eChadstone ehlaziywe ngokupheleleyo ukuze ivulwe nge-24 kaNovemba
I-Apple iyaqhubeka nokuhlaziya kwaye ivule zonke iivenkile ezinayo kwihlabathi liphela kancinci kodwa ngesantya esihle. Kule meko sithetha ngomnye wamagqala, ivenkile ebekwe eChadstone Shopping Centre eOstreliya yayiyivenkile yokuqala yeApple elizweni kwaye Ngoku iya kuvulwa kwakhona ilungiswe ngokupheleleyo ngo-Novemba 24.
Sijongene nenye yeenkqubo ezinkulu zala maxesha eziye zenziwa kwiivenkile zeApple naphakathi kwezi venkile enye ekwiFifth Avenue eNew York yongezwa, eza kuvalwa kude kube ngunyaka olandelayo.
Kodwa ukushiya bucala le venkile eNew York kwaye ijolise kuleya yase-Australia, kufanele kuqatshelwe ukuba ivenkile iya kuba ngathi iphindwe kathathu kunokuba yayinjalo ekuqaleni, iyakongeza iscreen esikhulu sokwenza iindibano zocweyo kwaye ubone intengiso ye-Apple, iya kuba nemithi ngaphakathi kunye nazo zonke iindaba ezongezwa kwiivenkile zesizukulwana esitsha.
Abasebenzisi bevenkile yaseChadstone ngokuqinisekileyo baya konwaba kwivenkile entsha kuba iya kuphucula kakhulu ngandlela zonke, kodwa ngakumbi kwiindawo zayo. Le yenye yeevenkile ezingama-22 iApple enayo eOstreliya kwaye into elungileyo malunga noku kulungiswa kukuba iya kongeza utshintsho olubalulekileyo kwitemplate yayo, Ukusuka kubasebenzi abangama-69 ababenabo ngaphambi kokulungiswa ukuya kuma-240 abaza kuyidinga ngoku. Ngokuqinisekileyo iya kuba kukukhuthaza okuhle kubo bobabini iApple kunye nabasebenzisi abaza kubona ivenkile entsha enamathuba amaninzi ngeendlela zonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ivenkile yaseAustralia eChadstone ehlaziywe ngokupheleleyo ukuze ivulwe nge-24 kaNovemba
Ixesha lokuguqula indawo kunye neClock, yazi ngalo mzuzu zonke iishedyuli zehlabathi
UHitman: Ukupheliswa, ngesaphulelo sama-60% kwixabiso laso